(Kugcine ukubuyekezwa On: 31/07/2020)
I University of Rostock akuyona nje kuphela inyuvesi endala Baltic Sea Region; liphinde acebe isiko. Futhi-ke, omunye Iningi Ziyamangalisa Amanyuvesi EYurophu. Njengoba yasungulwa ngo 1419, maduze ukugubha unyaka wayo 600. It siyocabanga ngazo emasikweni akudala wokufundisa abafundi nokwenza ucwaningo. Izakhiwo Gothic bokuzisholo, kuhambisana ephahlwe esihlahleni-ngaphakathi futhi amapaki uyokwenzela yezilungiselelo emangalisa. Ngezinye maphakathi yaseyunivesithi isakhiwo main ahehe okuyinto bakhangwa kithi ekuqaleni kuya ekwengezeni lokhu I Amayunivesithi amaningi Okumangalisayo. Ikona elitholakala okuphambene epaki ngasemthonjeni, endaweni okuphelele kubafundi nezivakashi ukuba uchithe isikhathi kokuncoma Ingaphandle ocebile isakhiwo.
I-University of Rostock ingenye amanyuvesi German nge ezihlukahlukene kakhulu ezingenzeka ezibhekwa izifundo. It unikeza ngaphezu 100 izifundo: 34 qeda nge umabhebhana, 56 ne iziqu zeMasters, 37 (okufaka hlangana abotitjhere) nge luhlolo wombuso kanye 3 nge Ph.D. Ngaphezu kwalokho, Centre for Mfundisi Ukuqeqeshwa kanye Educational Research akusho kuphela ucwaningo zemfundo kodwa futhi isebenza ekuthuthukiseni ikhwalithi yokubandula uthisha.
Ufuna ukwazi ukuthi ukufika omunye Amayunivesithi amaningi Ziyamangalisa EYurophu? Nomaphi lapho isiqondiso wena ukuhamba kusukela (isb. Rostock noma kwaseSchwerin, Berlin noma Hamburg), uthatha isitimela uze ufike Wismar sesitimela. Kusuka lapha, ungakwazi ibhesi kuya samabhasi e J.-R.-noBhekere-Strasse ngokusebenzisa imigqa 4 noma G (maqondana Ostseeblick) noma-B-D (maqondana Seebad Wendorf). Kuyinto kuphela okuwuhambo lwemizuzu engu-one kulokhu samabhasi yonkana Ipaki yezimoto ukuze Campus.
Aarhus University itholakala idolobha lesibili ngobukhulu Denmark sika futhi esibonakala ngokuqina campus yayo oluhlaza, ephelele echibini. Le nyuvesi kuyinto isibonelo esiphelele sendlela izakhiwo ezenziwe umuntu kanye imvelo Ungakwazi zisebenzisana ngendlela ephelele. Okwaboniswa isakhiwo main, kahle. Abaningi izakhiwo saklanywa wezakhiwo Danish C.F. Moller umklamo modernist ibonisa ukuthi intsha inyuvesi. Moller nozakwethu yakhe Kay Fisker futhi Povl Stegmann ababenomthwalo wemfanelo izakhiwo ophuzi-isitini. Ziyakwazi eyingqayizivele kanye ehlukile eyunivesithi. Lesi sakhiwo esikhulu Kusukela ngaleso sikhathi liye njengelinye lamazwe 12 Emisebenzini eminingi ebalulekile yezakhiwo emlandweni Danish. Esinye sezizathu eziningi ingenye kakhulu Amanyuvesi Okumangalisayo.
With kuka 44,000 abafundi, kuba nyuvesi ngobukhulu kuleli zwe. It licuketse of amakhono amane Ubuciko, Isayensi Nobuchwepheshe, Impilo, futhi Ibhizinisi futhi Isayensi Yabantu.
Emhlabeni jikelele ikhiqiza izithelo ezinhle, eyunivesithi unetinhlelo lokushintshisana endaweni nge phezu 50 izikhungo emhlabeni wonke. Lokhu kuhlanganisa University ye-Arctic, Utrecht Network, the Nordic Centre Fudan and the Nordic Centre India.
Aarhus okusezinhliziyweni omunye wemizila ebaluleke kakhulu ujantshi kokuhlangana eDenmark. Kukhona kusukwe ngehora kuya enyakatho, eningizimu, nasentshonalanga. Kusukela Wik futhi eYurophu Ephakathi, ukuxhumana kukhona nge Hamburg / Flensburg. Isikhathi sokuhamba kusukela eHamburg Aarhus cishe kwamahora amahlanu. Kusukela amazwe aseMpumalanga Yurophu ukuqeqesha uxhumo Aarhus hamba nge Poland futhi Copenhagen. Aarhus has amasevisi ngehora kuya nokusuka Copenhagen. Kuvulwa the Umhubhe ngaphansi Belt Elikhulu mfushane uhambo ngehora elilodwa. Lolu hambo manje kubathatha amahora amathathu nesigamu. Kunezinhlobo eziningana ukuxhumana nsuku zonke ukuze Sweden, Germany futhi lonke elaseYurophu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Kunayo Ziyamangalisa Amanyuvesi EYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spectacular-universities-europe/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)